September 2021 - ခေတ်သစ်နတ်ခ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းပြေးဆွဲလျက်ရှိသော YBSယာဉ်လိုင်အများစုတွင် ယာဉ်နောက်လိုက်များပြန်လည်ထားရှိကာ ယာဉ်နောက်လိုက်မှယာဉ်စီးခနှုန်းထားတွေကို ကောက်ခံမှုပြုလုပ်လာနေတယ်လို့ ခရီးသည်တွေဆီကသိရပါတယ်။ YBSယာဉ်လိုင်းများမှာ ယခင်က ယာဉ်ပေါ်တွင် ယာဉ်စီးခထည့်ရန်ငွေပုံးများထားရှိပြေးဆွဲခဲ့သော်လည်း ၂၀၂၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းတွင် ယာဉ်စီးခတွေကို ပိုမိုကောက်ခံခြင်း ၊ယာဉ်နောက်လိုက်များက ယာဉ်စီးခနှုန်းထားကောက်ခံခြင်းတွေကို ပြန်လည်ပြုလုပ်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ “ကုမ္ပဏီတွေကတောင်းခိုင်းတာလားမသိဘူး အရင်က ၂၀၀တန်ခရီးက ခု သုံးရာပေးရတယ် နောက်ပြီး စပယ်ရာတွေပြန်ပါလာပြီ သူတို့ကငွေကောက်တယ် ငွေထည့်တဲ့ပုံးတွေကိုပိတ်ထားတယ်”လို့ခရီးသည်တစ်ဦးကပြောပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပုဂ္ဂလိကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုကော်မတီ(YPTC)အနေနဲ့ ယာဉ်စီးခပိုမိုကောက်ခံမှုတွေကိုရှောင်တခင်စစ်ဆေးသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားသော်လည်း ယာဉ်စီးခပိုမိုကောက်ခံခြင်း၊ယာဉ်နောက်လိုက်များကယာဉ်စီးခကောက်ခံခြင်းတွေကို
ချဲလ်ဆီးနဲ့မန်စီးတီးတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပရီးမီးယားလိဂ်တွေ့ဆုံမှု ၁၂ ပွဲစလုံး သရေနဲ့ အဆုံးမသတ်ခဲ့ဘဲ ချဲလ်ဆီးက ၅ ပွဲနိုင်၊ မန်စီးတီးက ၇ ပွဲနိုင်ထားပါတယ်။ မန်ယူအိမ်ကွင်း ဗီလာနဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံမှု ၈ ပွဲမှာ ၇ ပွဲက နှစ်ဖက်သွင်းဂိုး ၃ ဂိုးနဲ့အထက် ရှိထားပါတယ်။ အဲဗာတန်နဲ့အဝေးကွင်းရင်ဆိုင်ရမယ့်နော်ဝစ်ခ်ျဟာ နောက်ဆုံးပရီးမီးယားလိဂ် ၇ ပွဲမှာ ၆ ပွဲကို အနိမ့်ဆုံး
မြဝတီမြို့မှာ ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ ၂၄ရက်နေ့ ၁၀ နာရီအချိန်ခန့်က အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့ သူတို့ရဲ့လက်ဝေခံ နယ်ခြားစောင့်တပ် (BGF)တို့ကြား အချင်းချင်းပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး BGF ဘက်က တစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ” ၂၇၅ တပ်ဘက်နားမှာ စောစောက ဆက်တိုက်ပစ်ကြတယ်။ တပ်နဲ့ ဘီဂျီအက်မှားပြီး တီးကြတာတဲ့။ ဘီဂျီအက်ဘက်က တစ်ယောက်ထိတယ်။ မှားစရာတော့ မရှိလောက်ဘူးထင်တယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ရှိနိုင်တယ်” လို့
ကေအဲန်ယူနယ်မြေ ညောင်လေးပင်ခရိုင် ဆောထိမြို့နယ်နှင့်မူတြော်ခရိုင် ဒွယ်လိုးမြို့နယ်အတွင်းမှာ စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ တပ်ဖွဲ့တွေနှင့်BGF တပ်တို့ဟာ ဒေသခံတွေအပေါ် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ KNU က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့က စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ ခလရ(၂၆၄)နှင့်ခမရ(၂၀)တို့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဆောထိမြို့နယ်ရှိ အင်းကျိုက်၊ ထမင်းရုံ၊ အော့ဖလားနှင့် တံတားကျိုးကျေးရွာတွေကို ဝင်ရောက်လာပြီး ၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ခိုင်းစေဖို့အတွက်
. လွိုင်လင်ခရိုင်၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်အတွင်း၌ RCSS/SSA နှင့် SSPP/SSA တို့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွား၍ စစ်ရေး တင်းမာနေမှုကြောင့် ဒေသခံပြည်သူ ၂၀၀၀ ခန့်မှာ ဘေးလွတ်ရာသို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေရကြောင်း သိရသည်။ . ရှမ်းတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ ဖြစ်ကြသည့် RCSS/SSA နှင့် SSPP/SSA တို့သည် စက်တင်ဘာလ ၁၄
ကလောမြို့နယ်၊ အောင်ပန်းမြို့ရှိ PNO အထူးဒေသ(၆)ရုံးရှေ့၌ ယနေ့ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်၊ နံနက်ပိုင်းတွင် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ . ” အတိအကျတော့ မသိဘူး၊ ဟုတ်တယ်။ ဒီနေ့မနက် ၁၁ နာရီမှာ ပေါက်တာ။ ကျွန်တော်တို့ ပါတီရုံးတော့ မဟုတ်ဘူး၊ အထူးဒေသ(၆)ရုံးပေါ့။ အဲရုံးရှေ့က လမ်း‌ပေါ်မှာ ပေါက်တာ။”
ဗဟိုဘဏ် မှ ညဏ်ကြီးရှင်များက ဆေးမြီးတို ဖြင့် ကုသလို ရလိုရငြား အကြံဖြင့် ဩဂုတ် လ အတွင်း ဒေါ်လာလဲလှယ်နှုန်းအား သတ်မှတ်ဈေး၏ ၀.၈% အတွင်းသာ ရှိရမည် ဟု ပြဠာန်းလာခဲ့သည်။ သို့သော် ဆေးမမီ၊ ငွေတန်ဖိုးက ကျသည်ထက် ကျလာသည်၊ မန်နီး ချိန်ဂျာများ ပိတ်ကုန်သဖြင့် မှောင်ခို ဈေးကွက်
September 17, 2021/ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မုံးကိုးမြို့ သို့ ဦးတည်ကာ တင့်ကား ၂ စီးအပါအဝင် စစ်ကားအစီး ၃၀ ကျော် ပါဝင်သောယာဉ်တန်းသည် စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်ည ပန်ဆိုင်း(ကြူကုတ်) မြို့တွင် ရောက်ရှိလာပြီဟု ဒေသခံများပြောသည်။ “ဘော်လုံးကွင်းမှာ စစ်ကားတွေ နားနေကြတယ်။ တင့်ကားတော့ စစ်တပ်ထဲမှာ။ စစ်ကား အစီး
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကနီမြို့နယ်အတွင်းသို့ အာဏာသိမ်းအဖွဲ့က စစ်အင်အား အလုံးအရင်းဖြင့် နယ်မြေရှင်းလင်းနေ၍ အများပြည်သူအနေဖြင့် လုံခြုံရေးသတိဖြင့် ပြင်ဆင်ထားကြရန် ကနီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ KNDF 1 က ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၇) ရက်နေ့တွင် အထူး သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားသည်။ နယ်မြေအတွင်း အင်တာနက်လိုင်း၊ မိုဘိုင်းဖုန်းလိုင်းများ ဖြတ်တောက်နိုင်သည့်အခြေအနေရှိနေ၍ လိုအပ်သည်များ ပြင်ဆင်ထားကြရန်နှင့် အများပြည်သူအနေဖြင့် အရေးပေါ်ကြုံလာပါက
နိုင်ငံ့အာဏာကို အဓမ္မနည်းဖြင့် ရယူရန်ကြံစည်ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် နိုင်ငံ့တာဝန်ကို ခေတ္တထိန်းထားတာဖြစ်ကြောင်း အိမ်စောင့်အစိုးရအဖြစ် အမည်ခံကာ ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ကို ရယူထားသည့် အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ၂၀၂၁ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ(၁၄)ရက်နေ့က ပြင်ဦးလွင်၌ ပြုလုပ်သည့် စစ်တက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၆၄) စစ်လက်ရုံးရွေးချယ်ပွဲ ခရီးစဉ်တွင် တပ်နယ်မှ အရာရှိများနှင့် ဗိုလ်လောင်းများကို တွေ့ဆုံရှင်းပြခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွင်